Maxay tahay ballanqaadkii casinos ee shirkadda waarta - Geofumadas
Abriil, 2019 tabo cusub
Qaar badan oo ka mid ah casinos waxay ku darayaan isbedelka in shirkadaha badankood ee adduunka maanta la kulma. Jaantuskan ma aha fadar ama xaalad ku-meel-gaar ah, lid ku ah, waxay ku dhowdahay waajibaad ah in dhammaan shirkadaha doonaya inay sii wadaan horumarinta ganacsiga. Waa lagama maarmaan in dhamaan dadka jaaliyada ahi ay ka warqabaan muhimadda daryeesha bii'ada iyo ka qaybqaadashada hagaajinta xaaladda guud ahaan.
Maalmahan, joornaal bixiyayaashu waa shirkado doonaya in ay ka soo baxaan waxyaabaha laga filayo macaamiisha, laakiin ayada oo ay ka go'an tahay in ay ka shaqeeyaan qaabka tayada ay sare u qaadeen heerarka ugu sareeya, oo ay ku jiraan u hoggaansanaanta sharciyada hadda jira meel kasta oo ay ka shaqeeyaan.
Waaridnimo iyo damiirka bulshada
Qeybo badan oo casinos ah ayaa bilaabay in ay adeegsadaan tallaabooyin aad u muhiim ah si ay u noqdaan kuwo dhab ah shirkadaha waarta. Kiisaska Caesar casinos ee Las Vegas waa tusaale wanaagsan oo ah sida shirkad weyn ay u beddeli karto si loo horumariyo tallaabooyin la taaban karo oo u keenaya xasilooni iyo saaxiibtinimo deegaanka. Casinos waxay fureen maaraynta istaraatiijiyada gawaarida ee la socota qaanuunka CodeGreen in ay iyagu samaysteen sanadka 2008.
Sidoo kale, casinooyinka kale ee waawayn waxaa lagu go'aamiyaa tamarta qoraxda. Casinos waa xarumo badan oo isticmaala koronto, sidaas darteed mashaariicda ay dejisay oo ay hirgelisay Resort Wynn iyo MGM ee Las Vegas ayaa ah mid aan caadi aheyn waxayna ka soo baxaan boqolkiiba halboolalka tamarta casinos u baahan.
Bandhigyada internetka sida NetBet, oo leh dhammaan kulamada dhaqameed ee qaab-dhismeedkooda qaab-dhismeedkooda iyo fursadaha cusub ee adduunka ee tartanka, waxay sidoo kale isticmaalaan tamar, laakiin kiiskan, kharashka waxaa loo maleynayaa inuu isticmaalo iyada oo loo marayo kombuyuutarkiisa, taleefanka gacanta ama nooc kasta oo kale oo qalab ah Waxaan u isticmaalaa inaan ciyaaro.
Casinos oo ah shirkado u gooni ah ayaa waxay la socdaan bay'ada, qaar badan oo ka mid ah waxay ka qayb qaataan nolosha bulshada ku wareegsan si ay u hagaajiso. Tusaale ahaan, waxay ku darsadaan ururada aan faa'iido doonka ahayn iyo kuwa samafalka kuwaas oo ka caawiya qaybo ka mid ah bulshada ama kor u qaadista waxbarashada iyo ciyaaraha. Waxa kale oo ay kafaalaqeeyaan dhaqdhaqaaqyada dhaqanka iyo dugsiyada madaxfurashada.
Dhinaca kale, markii casinosku hirgeliyo tallaabooyin la taaban karo oo lagu ilaalinayo bay'ada, waxay ku dhaqaaqeen dhaqdhaqaaqa bulshada waxayna ku martiqaadayaan deriska in ay qaataan tallaabooyin sida dib u cusbooneysiinta iyo tamarta tamarta. Run ahaantii, casinos waxay sii wadi doontaa in loo badalo in ay noqdaan shirkado casri ah oo dheeraad ah oo ku jira adduunka oo loo baahan yahay in la daryeelo.
Post Previous«Previous Apps for garoonka - AppStudio ee ArcGIS
Post Next Leica Geosystems waxay soo bandhigaysaa qalab cusub oo lagu hirgelinayo xogta shaxdaNext »